Cumar Cabdullaahi Faraweyne. [Sawir hore]
GAROOWE, Puntland - Madaxwaynaha Puntland, Cabdiweli Gaas, ayaa Cumar Cabdullaahi [Cumar Faraweyne] u magacaabey Taliyaha ciidanka Keydka, sida ku cad digreeto ku taariikheysan 2/10/2018 oo xafiiska Madaxweynaha kasoo baxday.
Farawayne ayaa horey usoo noqdey taliyaha ciidamada ilaaladda Madaxtooyadda iyo Gudoomiyaha gobolka Nugaal, xilkaasi oo uu 24-kii bishaan ka xayuubiyey Madaxwayne Gaas.
Magacaabista uu sameeyay Gaas ayaa qayb ka ah isbedalo uu maalmihii u dambeeyay ku sameynay hay'addaha nabad-gelyada, taasi oo aanan la ogayn qorshaha uu ka leeyahay maadaama muda xileedkiisu gabaabsi yahay.
Dabayqaadii bishii hore ee September, Gaas ayaa taliyaal cusub u magacaabey Hay'adda la dagaalanka mukhaadaraadka iyo taliska ciidamadda Xasilinta ee gobolka Nugaal.
Talaabooyinkaan ayaa imaanaya xili Madaxwayne Gaas horey loogu eedeeyay maamul xumo, musuq-maasuq, fashil dhanka amniga oo faraha ka baxaya iyo in xilalka uu magacaabayo uu u dhiibo shaqsiyaad ay reer ahaan iska dhaw yihiin.
Waxaa G/Sare Cumar Cabdullaahi Maxamed (Cumar Fara-weyne ) loo magacaabay Taliyaha Ciidanka Kaydka ah ee Dowladda Puntland.